ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း ယခု Mortal Kombat ၏ Savage ပထမမိနစ်ခုနစ်မိနစ်ကိုခံစားကြည့်ပါ
ဤအထူးတပ်ဖွဲ့များသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မဖြိုခွဲရန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ကြည့်ရမည့်အချိန်ရောက်လာပြီ Mortal Kombat နှင့်စူပါ pumped Shang-Tsung ကိုကိုးကားရန်, "ဒါဟာစတင်ခဲ့သည်!
Mortal Kombat နောက်ဆုံးကဒီမှာ ဂျိမ်းဝမ်ရဲ့ အနုမြူနဂါးထုတ်လုပ်မှု။ ရုပ်ရှင်အတွက်နောက်တွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအရာအားလုံးသည်အထင်ကြီးစရာပင်။ ထိုအရာများထဲမှအကောင်းဆုံးမှာသေဆုံးမှု၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုအလေးအနက်ထားသည်။ ရှေ့ဆက်သွားပြီးငါတို့အားလုံးဟာအချက်နှစ်ချက်ကိုဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာကို ၀ န်ခံကြပါစို့။ အဆိုပါကိုယ်ခံပညာနှင့်ပြင်းထန်သော gore ။
အတွက်အနှစ်ချုပ် Mortal Kombat ဤကဲ့သို့သောသွား:
“ Mortal Kombat သည်ရှေးကိုယ်ခံပညာပြိုင်ပွဲ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော၊ ကမ္ဘာမှ Shaolin ဘုန်းကြီးလျောင်ကန်းကိုပြိုင်ဘက်အဖြစ်ဖိတ်ကြားသည်။
နောက်ဆုံးကလစ်ထဲမှာပထမ ၇ မိနစ်ကိုကြည့်ပါ Mortal Kombat။ ဒီတစ်ခုမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့မူလအစဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီ။ ကျနော်တို့ကစင်္ကာပူကိုတရားဝင်မခေါ်ယူမီက Sub-Zero အစည်းအဝေး Scorpion ကိုကြည့်သည်။ လက်စားချေဇာတ်လမ်းတွေလိုပဲဒီဟာကအဖြစ်ဆိုးနဲ့စတယ်။
ကျနော်တို့ဒီဇာတ်လမ်းအတွက်မူလအစပုံပြင်များအများကြီးမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ နောက်တွဲယာဉ်၏အသွင်အပြင်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Sonya Blade၊ Jax, Kano နှင့်အခြားသူများအားကမ္ဘာကြီးဆုံးဖြတ်ခြင်းပြိုင်ပွဲသို့မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်နေလိမ့်မည်။ Mortal Kombat.
မင်းကြည့်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားနေလား Mortal Kombat ဒီသောကြာနေ့ မှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
Annie Potts က Ghostbusters: Afterlife နှင့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးသည် trippy ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် ဤနေရာတွင်ပိုမိုဖတ်ပါ။
Mortal Kombatကင်းမြီးကောက်သုညWarner Bros
'Bad Hair' ဒါရိုက်တာ Justin Simien သည် Haunted Mansion ဇာတ်ကားသစ်အတွက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်